Google, Twitter ary Facebook dia mampiseho ny fanohanany amin'ny ady ataon'i Apple amin'ny FBI | Avy amin'ny mac aho
Google, Twitter ary Facebook dia mampiseho ny fanohanany amin'ny ady ataon'i Apple amin'ny FBI
Facebook, Twitter y Google Nivoaka hanohana ny fanapahan-kevitr'i Apple aza mamorona varavarana ambadika amin'ny rafitra fiasan'ny iOS hanampy ny FBI amin'ny raharaha fampihorohoroana San Bernardino. Ireo tompon'andraikitra amin'ireo orinasa lehibe ireo dia samy naneho fanehoan-kevitra ampahibemaso tao amin'ny Twitter mampiseho ny fanohanany an'i Apple, ary nisaotra azy ireo tamin'ny tolona fanavotana ny tsiambaratelon'ny mpanjifa.
Ny voalohany nanohana ny fanapaha-kevitr'i Apple sy i Tim Cook dia CEO Google Sundar Pichai, izay nanala sarona teny manan-danja sasany tao amin'ny Twitter, toy ny 'Ny fanerena ireo orinasa hamela ny fanaovana piraty dia mety hanimba ny fiainany manokana'. Tamin'ny farany dia nilaza i Pichai fa miandry ny adihevitra misokatra momba an'io olana lehibe io izy.
3/5 Manangana vokatra azo antoka izahay hitahirizana ny mombamomba anao ary omenay alàlana ny fampiharana ny angon-drakitra arakaraka ny baikon'ny lalàna
- sundarpichai (@sundarpichai) Febroary 17, 2016
4/5 Saingy tena hafa tanteraka noho ny mitaky orinasa hamelana ny fanapahana fitaovan'ny mpanjifa sy angona. Mety ho ohatra manahirana
5/5 Manantena ny adihevitra misokatra sy misokatra momba an'io olana lehibe io
Taorian'ny Pichai, Tale jeneralin'ny Twitter Jack Dorsey Nasehony koa ny fanohanany an'i Apple ary nisaorany azy noho ny fitarihany.
Mijoro miaraka isika @tim_cook ary Apple (ary misaotra azy noho ny fitarihany)! https://t.co/XrnGC9seZ4
- Jack (@jack) Febroary 18, 2016
Farany, Facebook Nandefa hevitra momba izany koa izy nilaza fa hanao izany izy ireo 'miady amin-kery amin'ireo fepetra takiana voalaza etsy ambony, satria malemy ny orinasa noho ny fiarovana ny rafitr'izy ireo', na dia tsy voalaza mazava aza ny fanohanana an'i Apple, na dia miharihary aza amin'ny teniny.
Manameloka ny fampihorohoroana izahay ary manana firaisankina tanteraka amin'ireo iharan'ny fampihorohoroana. Ireo izay manandrana midera, hampiroborobo na manomana hetsika fampihorohoroana dia tsy manana toerana ao amin'ny serivisinay. Ankafizinay koa ny asa sarotra sy tena ilain'ny lalàna hiarovana ny olona. Rehefa mahazo fangatahana ara-dalàna avy amin'ireo manam-pahefana ireo izahay dia manara-dalàna. Na izany aza, hitohy amin'ny ady mahery vaika hanoherana azy isika, satria malemy ny orinasa noho ny fiarovana ny rafitr'izy ireo. Ireo fitoriana ireo dia hamorona ohatra ratsy ary hanakana ny ezaky ny orinasa hiantohana ny vokatra vokariny.
mahagaga Yahoo ary Microsoft dia nandà ny hanome hevitra momba izany, na eo aza ny zava-misy ao amin'ny 'Reform Government Oversight (RGS)', izay Microsoft namoaka fanambarana momba io lohahevitra io ny ampahany.
Ireo orinasam-panaraha-maso ataon'ny governemanta dia mino fa tena zava-dehibe ny fanakanana ireo mpampihorohoro, mpanao heloka bevava ary afaka manampy ny polisy, hananany hery bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fanodinana ny didin'ny fitsarana hahazoana vaovao mba hitandroana ny filaminana. Na izany aza, ny orinasan-teknolojia dia tsy tokony terena hanangana varavarana miverina amin'ny haitao mitazona ny fampahalalan'ny mpampiasa azy ireo. Ny orinasan'ny RGS dia manolo-tena amin'ny fanomezana lalàna ny fanampiana ilainao amin'ny fiarovana ny filaminan'ny mpanjifanao sy ny mombamomba ny mpanjifanao.
Orinasa hafa izay ao anatin'ny vondrona RGS izay misy AOL, Yahoo, Evernote, Dropbox y LinkedIn, tsy nanambara momba izany izy ireo.
Raha ny amin'ny ady ataon'i Apple FBI, nanome fotoana bebe kokoa an'i Apple ny fitsarana hamaly ny baikony hamaha ny iPhone 5C do Mpampihorohoro San Bernardino. Nanome an'i Apple 5 andro hamaliana izany ny fitsarana tamin'ny voalohany, saingy nitarina hatramin'ny 26 Febroary ny fe-potoana, izay nisy taratasy misokatra iray avy Tim Cook dia nilaza mazava fa ny orinasa tsy hanaiky ny didim-pitsarana, ary hanao izay rehetra ilaina mba hiarovana ny tsiambaratelon'ny mpanjifa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Google, Twitter ary Facebook dia mampiseho ny fanohanany amin'ny ady ataon'i Apple amin'ny FBI
Saingy azoko tsara fa ny Facebook dia mivarotra ilay fampahalalana, tsy hitako izay eritreretina, tsara fa i Apple dia miaro ny mombamomba ny mpanjifa toy izao, saingy tsy fantatro, mpampihorohoro koa izy io, izany hoe, tamin'ny toe-javatra toy izany raha Tohanako ny hanakanany azy io ary hanaterany
Ahoana ny fomba hahitana ny isan'ireo tsingerina fiampangana ho an'ny baterinao MacBook
Ahoana ny fomba hanampiana hetsika amin'ny kalandrie avy amin'ny mailaka